နံနက်စာ စားခြင်း အကြောင်းအရာ -... | Protected by DMCA.com
နံနက်စာ စားခြင်း အကြောင်းအရာ - Hello Sayarwon
Site Report for: hellosayarwon.com
နှိုးစက်သံကြားတာနဲ့ ကလေးတွေက ကျောင်းကားမီဖို့အတွက်ပဲ လုံးပန်းနေကြရပါတယ်။ အဝတ်လဲ၊ သွားတိုက်၊ တံခါးပိတ်ပြီးတာနဲ့ နံနက်စာလွတ်ကြပါတော့တယ်။ ကလေးတော်တော်များများအဖို့ ဒီအလေ့အကျင့်က ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ပြဿနာတစ်ရပ်ပါပဲ။ နံနက်စာဆိုတာ နေ့တစ်နေ့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားလို့ပါ။ နံနက်စာစားတာက ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ် နံနက်စာလွတ်တာက ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်ကို မကျစေပဲ ပိုတိုးလာစေတတ်ပါတယ်။ နံနက်စာစားတဲ့ကလေးတွေက မစားတဲ့ကလေးတွေထက် calories ၊ fiber ၊ cholesterol တွေ ပိုရတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နံနက်စာစားတဲ့ ကလေးတွေမှာလဲ ပြည့်ဝတဲ့အဆီ ရရှိတာ ပိုနည်းတတ်ပါတယ်။ နံနက်စာစာခြင်းက ကျောင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအပေါ်လဲ လွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်။ နံနက်စာစားတဲ့ကလေးတွေက ပိုကောင်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ စူးစမ်းလေ့လာသူတွေက သက်သေပြထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျောင်းမှ ပိုကောင်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုကောင်းတယ်၊ စွမ်းအားပိုရှိတတ်ကြပါတယ်။ …
Protection: This Uniform Resource Locator or URL: https://hellosayarwon.com/parenting/child-nutrition/%E1%80%94%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9/ is owned or published under permission by the owner of this channel. The audio and or video presentation is original content and or contains original content published under permission including but not limited to text, design, images, photographs, audio and video and are considered to be the Intellectual Property of the owner of this channel, whether copyrighted or not, and are protected by DMCA.com Protection Pro Service using but not limited to the Digital Millennium Copyright Act Title 17 Chapter 512 (c)(3). Reproduction or re-publication of this content is prohibited without permission. This statement and the protection service connected to it is no wayareplacement of or connected to any similar statements or services provided to the content owner by this service platform.
Protection: All original content on https://hellosayarwon.com/parenting/child-nutrition/%E1%80%94%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9/ is created by the website owner or published under permission including but not limited to text, design, code, images, photographs and videos are considered to be the Intellectual Property of the website owner, whether copyrighted or not, and are protected by DMCA.com Protection Pro Service using the Digital Millennium Copyright Act Title 17 Chapter 512 (c)(3). Reproduction or re-publication of this content is prohibited without permission.